Deeqaha waxbarashada ee soo galootiga iyo qaxootiga ee dalka Mareykanka | Refugee Center Online
Sidee baan u heli karaa deeq waxbarasho ee dadka ajnabiga ah iyo deeqaha waxbarasho ee qaxootiga?
Waxaa jira deeq badan oo loogu talogalay qaxootiga iyo deeqaha waxbarasho ee dadka ajnabiga ah. Baro deeq waxbarasho oo aad codsan kartaa inaad iska bixiso waxbarashada.
Deeqo waa abaalmarin lacag si ay kaaga caawiso kharashka koolejka.
In Maraykanka, waxaa caado u ah ardayda in ay codsadaan deeqaha waxbarasho taageero dhaqaale (lacag) si ay u caawiyaan bixiyo college. deeq The on this page waxaa loogu tala galay ardayda qaxootiga iyo soo galootiga. Qaar ka mid ah iyaga ka mid ah waxaa loogu tala galay “jiilka kowaad” ardayda. Waxa uu noqon karaa in waalidkaa ahaayeen soo galootiga ama qaxootiga. Waxa kale oo macnaheedu noqon karaa in aad tahay muhaajir ama qaxooti oo hadda uu leeyahay dhalashada.
Mid ka mid ah deeqda waxbarasho ee $10,000 waxaa la siiyaa sannad walba. Tani deeq waxbarasho waa non-cusboonaysiin karo. Taasi waxay ka dhigan tahay in aadan mar kale ka heli doonaa sanadka soo socda. Waxaa lagu saleyn karaa hal sano waxbarasho. Codsaduhu waa inuu la dhashay ka baxsan laga xoreeyo dalka iyo waa hore u ahaan dugsiga (ama aqbalay) sida arday undergraduate waqti-buuxa ah ah kulliyadda laga xoreeyo dalka la aqoonsan yahay ama jaamacad. dugsiga sare ee doonaya inay isku qoraan college sidoo kale xaq u leedahay. qoraalka A dhawaan waa inuu tusaa GPA ah 3.4 ama ka weyn.
The Deeqda Dream.US - Deeqda Qaranka
Dream The. US Deeqda - Deeqda Opportunity
Barnaamijka Gates Millennium Culimada
Deeqo for African American, American Indian / Alaska Native *, Asian Pacific Islander American, iyo ardayda Hispanic American. Waa in aad haysato a “baahida loo qabo maaliyadda weyn” ee dalka Mareykanka. Waxaad u baahan doontaa inaad la wadaagto inta lacag ee qoyskaaga ka dhigaysa oo ay go'aan ka gaari doona haddii aad codsan kartaa.
A $90,000 abaalmariyey ka badan 2 sano ee soo galootiga, qaxootiga, iyo jiilka kowaad ee Maraykanka. waa in la qorsheynayo in aad qorto wakhti buuxa barnaamijka shahaado. Waxa kale oo aad noqon mus da'doodu ka yar tahay 31.
laba $1000 deeq soo guuray ama reer waddanka u soo guurey. Si aad ugu qalantid waa in aad ku kulliyad 4-sano ama waa in aad la aqbalay by kulliyad 4-sano. Your GPA waa in ay noqdaan 3.0 ama wax ka sareeya iyo weliba.
Deeqda oo ah ilaa $7,000 soo guuray dakhligoodu hooseeyo. Waa in aad ka qalin dugsiga sare ama ku qoran barnaamijyada kulliyad iyo graduate. Waa in aad ku nooshahay ama dhigato dugsi ku yaal Aagga San Francisco Bay.
Deeqda loogu talagalay ardayda waddanka u soo guurey ee jiilka kowaad. Waa in aad laga xoreeyo dalka ah. muwaadin ama degan sharci ee deggan California.
Deeqda waayo, jiilka kowaad ee laga xoreeyo. muwaadiniinta, qaxootiga, iyo muhaajiriinta ka qalin Wake dugsiga sare County a. Uma baahnid inaad waraaqo sharci ah si aad u dalbato.
Deeqda dadka qaxootiga ah ee deggan aagga iyo-gobolka Greater Cincinnati. Dhammaan qaxootiga ku raad tacliinta sare ee dadweynaha, gaarka ah, college farsamo ama jaamacad in laga xoreeyo dalka ah. codsan kartaa. Ma jiraan xayiraad da'da.
Waxaa loogu talagalay ardayda kuwaas oo qoysaska dakhligoodu hooseeyo. dhaafitaanka A ka dhigan tahay in aadan u baahan doontaa inaad bixiso kharashka. Waxaad codsan kartaa ilaa afar dugsi. Dhaafitaanada waa ay heli karaan ardayda 11 dakhligoodu hooseeyo iyo fasalka 12aad ee laga xoreeyo dalka ah. ama laga xoreeyo. dhulal. xoreeyo. muwaadiniinta ku nool meel ka baxsan laga xoreeyo dalka ah. waxaa laga yaabaa in ay leeyihiin lacagta imtixaanka dhaafi. Waxaad ka dalban kartaa SAT ardey oo lacag Test Subject haddii aad ku jirto fasalada 9 iyada oo loo marayo 12.
The Ariane de Rothschild (ADR) Fellowship: Social Ganacsi & Network Cross-dhaqanka
Barnaamijka The Catholic Services Relief International Development oo waxmatarayaal ah
Asian, South East Asia iyo Islander Pacific
Contact: Outreach iyo Xiriirka Bulshada ee outreach@apiasf.org
Deeqda la siiyo ardayda undergraduate iyo qalin dano. Waa in aad xilka baneeyey ku saabsan barashada sayniska, ardayda caafimaadka ama biology dhaxalka Asian Southeast.
Dhowr deeq waxbarasho diyaar u ah Arab Americans ama shaqsiyaad ka soo jeeda Carab waxbarasho ee laga xoreeyo dalka ah. Fadlan booqo website-ka liiska buuxa ee deeqaha waxbarasho.
Arab American Association ee Injineerro iyo Horseedayaashii (O) – Capital Area
Deeqda loogu talagalay ardayda waddanka u soo guurey ee jiilka kowaad. Waa in uu xoreeyo dalka ah. muwaadin ama degan sharci ee deggan California.
Deeqda la siiyo ardayda ku nool dunida ee ay yihiin qaxooti ama magangalyo-doonka.
IIE Suuriya Consortium for Waxbarashada Sare ee Crisis
deeq Full iyo qayb loogu talagalay ardayda Suuriya qorsheyneysa in ay dhigtaan jaamacad xubin Suuriya Consortium. Waxaad ka arki kartaa liiska jaamacadaha on website ka.
Deeqaha waxbarashada ee soo galootiga iyo shaqaalaha muhaajiriinta ah
Deeqda la siiyo ardayda weyn-qiimeeynayo. waa in la qorsheynayo in aad ku eryan degree undergraduate ah kulliyadda a 4-sano. Codsadayaasha waa in la oggolaado DACA ama TPS. Waa in aad xaq u leedahay in ay ka qayb galaan layliyo bixisay.
The Fund maxkamadda Hegg The
Waxaa jira deeq badan ee soo galootiga iyo qaxootiga. Haddii aad og tahay dadka kale in aad ku darto, fadlan email: info@therefugeecenter.org. Waxaana ku dari doonaa liiska.
Waxa kale oo aad codsan kartaa deeq, kuwaas oo ah nooc kale oo taageero dhaqaale. Xafiiska Gargaarka Ardayga ee Federalka siisaa deeqo, daymaha, iyo lacagta shaqo-waxbarasho kulliyadda ama shaqo dugsi. Waxaad codsan kartaa Codsiga Federaalka ah ee Gargaarka Ardayga Free (FAFSA).